Bareflank, chishandiso chekukurumidza kukura kweakasarudzika hypervisors | Linux Addicts
bareflank Zvakanyorwa muC ++ uye zvinoenderana neC ++ STL. Bareflank's modular architecture inokutendera iwe kuti uwedzere nyore huripo hypervisor kugona uye kugadzira yako wega hypervisor shanduro, ese ari kushanda pahardware (seXen) uye mune iripo software nharaunda (seVirtualBox). Iwe unogona kumhanyisa sisitimu yekushandisa yenzvimbo yekutambira mune yakaparadzana virtual muchina. Iyo kodhi yeprojekiti yakagoverwa pasi pe LGPL 2.1 rezinesi.
Bareflank inotsigira Linux, Windows, uye UEFI pa64-bit Intel uye AMD CPUs. Intel VT-x tekinoroji inoshandiswa pakugovaniswa kwehardware yemuchina chaiwo zviwanikwa. Mune ramangwana, kuenderana ne macOS uye BSD masisitimu, pamwe nekugona kushanda papuratifomu yeARM64, inofungidzirwa.
Uyewo, iyo purojekiti inovandudza yayo controller kurodha VMM (Virtual Machine Manager), ELF charger kutakura VVM modules uye bfm app kubata iyo hypervisor kubva munzvimbo yemushandisi.
Kubva paBareflank, iyo Boxy iri kugadzirwa virtualization system, inotsigira kutangwa kwevaenzi masisitimu y inogonesa kushandiswa kweakareruka chaiwo michina ine Linux uye Unikernel kutanga masevhisi akasarudzika kana maapplication.
Muchimiro chemabasa ari ega, inogona kumhanyisa akajairwa pawebhu masevhisi uye maapplication ane zvakakosha kuvimbika zvinodiwa uye chengetedzo, pasina pesvedzero yenzvimbo inotambira (nzvimbo yevaenzi inoparadzaniswa nemuchina wakasiyana wemashini). Bareflank iri zvakare pamwoyo weiyo MicroV hypervisor, yakagadzirirwa kumhanyisa minimalist virtual muchina (imwe application virtual muchina), kushandisa iyo KVM API, uye yakakodzera kuvaka mishoni-yakakosha masisitimu.
A toolkit yekunyora mawedzero anopiwa kuti ushandise. Ichishandisa zvinhu zvinotsanangurwa muC ++ 11/14 zvakatemwa, raibhurari yekusunungura iyo yakasarudzika stack (kusunungura), pamwe neyayo yekumhanya-nguva raibhurari kutsigira kushandiswa kwevanovaka / vaparadzi uye log inobata kunze.
Kana ari hukuru hutsva hweiyo vhezheni itsva yeBareflank 3.0 zvinotevera zvinobuda pachena:
Shanduko kune iyo microkernel concept. Pakutanga, iyo hypervisor yakanga ine monolithic architecture, iyo yekuwedzera kushanda, yaifanira kushandisa API yakakosha kurekodha callback call, izvo zvakaita kuti zvive zvakaoma kukudziridza mawedzero nekuda kwekusungira kumutauro weC ++ uye mudziyo wemukati.
Iyo nyowani microkernel architecture inopatsanura iyo hypervisor kuita kernel zvikamu zvinomhanya pazero zero uye mawedzero anomhanya pane yechitatu mhete (mushandisi nzvimbo). Mativi ese ari maviri anomhanya muVMX midzi modhi uye nezvimwe zvese, kusanganisira nharaunda yekutambira, mune isiri-midzi VMX modhi.
Mushandisi nzvimbo yekuwedzera shandisa Virtual Machine Manager (VMM) mashandiro uye kupindirana neiyo hypervisor kernel kuburikidza nekudzokera kumashure inoenderana system mafoni. Mawedzero anogona kugadzirwa mune chero mutauro wechirongwa, kusanganisira kushandisa Rust mutauro, iyo yakagadzirira-kushandisa-yekuwedzera mienzaniso inopihwa.
Yakashandura kushandisa yayo BSL raibhurari ine Rust uye C ++ rutsigiro, ichitsiva ekunze libc ++ uye newlib raibhurari. Kubvisa kutsamira kwekunze kwakabvumira Bareflank kushandisa tsigiro yekuvaka paWindows kurerutsa budiriro pachikuva ichi.
Bareflank ikozvino inouya nerutsigiro rwe AMD. Pamusoro pezvo, Bareflank budiriro ikozvino inoitika pane sisitimu ine AMD CPU uye ipapo ndipo painoenda kuIntel CPU, kuve nechokwadi chekuti budiriro ye AMD inotorwa zvakakomba.
Iyo inotakura yakawedzera tsigiro yeArMv8 dhizaini, iyo hypervisor adapta iyo ichapedzwa mukuburitswa kunotevera.
Kutevedza neAUTOSAR uye MISRA mission yakakosha system dhizaini zvinodiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Bareflank, chishandiso chekusimudzira nekukurumidza kweakasarudzika hypervisors
Chrome 95 inonyatso kutaura zvakanaka kuFTP uye inowedzera zvitsva zvevagadziri